Home Falanqeynta Kulamada Falanqaynta Kulanka Real Madrid Vs Real Sociedad ee Horyaalka Spain
Real Madrid ayaa martigelin doonta Real Sociedad, iyadoo kooxda Zinedine Zidane ay dooneyso inay soo yareyso farqiga u dhexeeya Atletico Madrid oo hogaanka u heysa La Liga.
Real Madrid:- Real Madrid ayaa waayi doonta xiddigo muhiim ah kulanka Kulankan iyada oo Eden Hazard, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Eder Militao, Federico Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola iyo Karim Benzema ay dhamaantood dhaawacyo ku maqan yihiin.
Zinedine Zidane ayay u badan tahay inuu Isco u isticmaali doono booska sagaal ee beenta ah ee Real Sociedad.
Real Sociedad:- Imanol Alguacil ayaa helaya koox dhameystiran oo uu ka soo xusho kulankan ay la ciyaarayaan Real Madrid. David Silva iyo Asier Illarramendi ayay u badan tahay inay kasoo muuqan doonaan La Reales ka dib markii la nasasiiyay kulankii Real Sociedad ee 0-0 ay la galeen Manchester United ee UEFA Europa League intii lagu jiray usbuucan.
Si kastaba ha ahaatee, daafaca reer Spain Mikel Merino ayaan diyaar u noqon doonin xulkiisa madaama uu ganaax ku maqan yahay.
Real Madrid ayaa inta badan guuleysatay labada dhinac. Los Blancos ayaa badisay seddex ka mid ah shantii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka horyimaadeen Real Sociedad, iyadoo kooxda Real Sociedad ay kaliya badisay hal kulan mudadaas.
Real Madrid ayaa hal guul u jirta inay barbareyso rikoorkeedii guulaha ugu fiicnaa LaLiga ololahan (waxay guuleysteen shantii kulan ee ugu horreysay bishii Diseembar),
Kaliya Cristiano Ronaldo iyo Carlos Santillana (min 15 gool) ayaa ka goolal badan Real Madrid kulankii Real Sociedad marka loo eego Karim Benzema taariikhda LaLiga marka la eego ka hor imaatinka kooxdan.
Laacibka Real Sociedad ee David Silva ayaa guuldarooyin badan kala kulmay Real Madrid marka loo eego kooxaha kale ee LaLiga (lix kulan 10-kii kulanba), halka uusan waligiis ku guuleysan inuu gool ka dhaliyo Real Madrid gurigiisa tartanka (shan kulan la ciyaaray).
Previous articleReal Madrid oo Fasaxeysa mid kamid ah Daafacyadeeda Muhiimka ah
Next articlePep guardiola oo ka hadlay hadii uu Aguero Siin doono Waqti uu ku ciyaaro.